စိတ်ကူးပျော်ရာ: August 2012
Firefox Browser မှာ အသံမလာ ၊ Video ကြည့်မရခြင်း
Saturday, June 30, 2012 ဝင်းကမ္ဘာကျော်
Software တွေ အသွင်းအထုတ်များတဲ့ ကျနော် ဒီနေ့ Software တစ်ခုကို Install လိုက်တာ အကောင်ပါသွားတယ်ဗျာ နောက်ပြီး Install ထားတဲ့ Software တွေကလည်း အရမ်းများနေတော့ သူတို့အချင်းချင်း မတည့်ကြဘူးနဲ့ တူပါတယ် Restart ကျသွားပြီး Window ပြန်မတတ်တော့ပါဘူး... ဒါနဲ့ Window ပြန်တင်လိုက်ရတယ်ဗျာ...... ဒီနေရာမှာ တိုက်ဆိုင်နေလို့ Firefox Browser မှာ Video ကြည့်မရဘူး အသံမလာဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတာနဲ့ ပါတ်သက်ပြီးပြောချင်တာပါ... အင်း....တကယ်တမ်း Window7စသုံးကတည်းက ဒီလိုမျိုး ပြဿနာ တခါမှ မကြုံဖူးတာ အမှန်ပါ။ အင်းလေ ကွန်ပြူတာ ဆိုတာမျိုးကလဲ ကြာလာရင်တော့ ဖြစ်တတ်တာပါပဲ ကျနော်ဆိုပိုဆိုး တနေ့တနေ့ သွင်း/ထုတ် နေရတဲ့ Software တွေ စက်ဘယ်ခံနိုင်မလဲဗျာ.... Window ပြန်တင်တင်နေရတာလဲ ခဏခဏ ပါပဲ...သိတဲ့ အတိုင်းပဲလေ Window တင်ပြီးရင်တော့ Driver ကပြဿနာ မရှိပေမဲ့ ... စောစောကပြောနေတဲ့ Browser တွေမှာ Video တွေကြည့်လို့ရဖို့ အသံတွေလာဖို့ကျတော့ လိုအပ်တဲ့ Software တွေကို အသစ်ပြန်ထည့်ပေးရပါတယ် .. အသစ်ထည့်ပေးရတာလည်း ဘာမှမခတ်ပါဘူး Browser ကို ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ သူအတွက်လိုအပ်နေတာတွေကို ပြပေးပါတယ် ကိုယ်က နောက်ကနေ ခလုတ်လေးနှိပ်ပေးရုံပါပဲ..။
Window ပြန်တင်ပြီး Firefox Browser မှာ Flash Player အလုပ် မလုပ်လို့ ပြန်ထည့်ပေးတဲ့ အတွေ့အကြုံလေးကို လုံးဝ မသိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ဗဟုသုတ အဖြစ်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်....:)
(အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင် မရှိတဲ့နေရာမျိုးဆိုရင်တော့ ကွန်ပြူတာအတွက် အဓိက လိုအပ်တဲ့ Adobe Flash Player တို့ Adobe Reader တို့လိုမျိုးကို မိမိစက်ကောင်းနေစဉ် ဒေါင်းယူသိမ်းဆည်းထားသင့်ပါတယ် )
ကျနော် Window ပြန်တင်ပြီး Firefox Browser ကို ဖွင့်လိုက်တော့ အောက်ကပုံ အတိုင်း မြင်တွေ့ရပါတယ်...။ Flash Player မရှိသေးလို့ပါ...။
အပေါ်နားက Install Missing Plugins ဆိုတာလေးကို (A Plugin is needed to display this content. Install plugin ဆိုတာကိုပဲ နှိပ်နှိပ်) နှိပ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ ပေါ်လာတဲ့ Box မှာ Next ကို နှိပ်ပေးလိုက်ရင် Flash Player ကို သူ့ဘာသာသူ Download လုပ်ယူသွားမှာပါ...ပြီးရင် Finish ကိုနှိပ်ပေးပြီး...
Double Click နဲ့ Run >> Install
Firefox Browser ကိုပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင် အောက်ကပုံအတိုင်း Flash Player
နောက်တစ်ခုကတော့ Video တွေကြည့်မရသေးဘူးဆိုရင် Browser ရဲ့ Add on မှာ ပြန်စစ်ဆေးကြည့်ပါဦး....
Plugins မှာ Enable ဖြစ်နေရင် အားလုံး Disable ပြင်ပေးလိုက်ပါ...ပြီးရင် Browser ကို Restart ပေးပါ (ပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်ကြည့်ပါ)
ကဲ... ကျနော်သိသလောက်တော့ ဒါလောက်ပါပဲ...။
အသံမလာဘူး Video တွေ ကြည့်မရသေးဘူးဆိုရင်တော့ အပေါ်က အကြောင်းရာအတိုင်း ဖြစ်နိုင်သလို Virus ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် ဒါမှမဟုတ် Driver တွေ Update မဖြစ်တော့တာမျိုးကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်...Driver ကြောင့်လို့ထင်ရင် ဒီ Software လေး Download ချပြီး စစ်ပေးကြည့်ပါ ... Virus ကြောင့်ထင်ရင် Antivirus နှစ်မျိုး သုံးမျိုးနဲ့ Full Scan လုပ်ပေးပါ ...။ Firefox ကို Your Uninstaler နဲ့ Uninstall လုပ်ပေးပြီး CCleaner လိုမျိုး Cleaner တခုခုနဲ့ ရှင်း... ပြီးတော့ Firefox ကိုပြန် Install ပေးကြည့်ပါ...။
အပေါ်ကနည်းလမ်းတွေအတိုင်း လုပ်ပေးကြည့်တာမှ မရသေးဘူးဆိုရင်တော့..........
အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ..... မိုးလင်းသွားပြီဗျာ .. အိပ်တော့မယ်....:P
ဝင်းကမ္ဘာကျော် (Software နှင့် နည်းပညာ)
နားလည် တတ်ကျွမ်းတဲ့ သူငယ်ချင်းများရှိလို့ တခြားနည်းလမ်းလေးများရှိခဲ့ရင် အောက်က Comment မှာ မိမိ တို့ အတွေ့အကြုံ လေးတွေကို အများ ဗဟုသုတ ရစေဖို့ ဖြည့်စွက်ရေးသားပြီး မျှဝေသွားကြပါဦးလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ.....:)
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 8/31/2012 09:29:00 AM No comments:
မြန်မာလို IT နည်းပညာ Ebook အမြောက်အများ ဒေါင်းလိုပါက .....
Thursday, September 15, 2011 ဝင်းကမ္ဘာကျော်
မူရင်း= မြန်မာလို IT နည်းပညာ Ebook အမြောက်အများ ဒေါင်းလိုပါက .....
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 8/31/2012 07:50:00 AM No comments:
Posted by Mr Sky on သြဂုတ် 30, 2012 at 5:35pm
ခေါင်းစဉ်ကိုဖတ်ပြီး ဖတ်စရာစာအုပ်တွေလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့၊ သူငယ်ချင်းတွေ အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာ၊ စီးပွါးရေးလုပ်တဲ့နေရာတွေမှာ အသုံးဝင်စေမယ့် မှတ်စုစာအုပ်တွေပါ။ အဲဒီစာအုပ်တွေကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ရမှာ။ စာအုပ်တွေကတော့
ဒီစာအုပ်ကတော့ အိပ်ကပ်ထဲ အလွယ်တကူထည့်သွားလို့ရတဲ့ အရွယ်ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အသုံးပြုပုံကတော့ ကိုယ့်စိတ်ကူးထဲမှာပေါ်လာတဲ့ အရာတွေ၊ ဈေးဝယ်ရမယ့်စာရင်းတွေကို ဈေးဝယ်နေရင်းမှတ်သား၊ သူငယ်ချင်းနဲ့လမ်းမှာတွေ့လို့လိပ်စာပေးရင်မှတ်၊ အစည်းအဝေးတွေမှာမှတ် စတဲ့ အကြမ်းမှတ်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုမှတ်သားရာမှာ သုံးပါတယ်။ ပြီးရင်မှတ်ထားတာတွေကို သက်ဆိုင်ရာစာအုပ်တွေမှာ ပြန်ကူးပါတယ်။
ဒီစာအုပ်မှာ မှတ်သင့်တာတွေက လုပ်ငန်းနှင့်ဆိုင်တဲ့ အချိန်အတွယ်၊ အတိုင်းအတာများရဲ့ ဆက်သွယ်မှု ဇယားတွေ၊ လုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်တဲ့လူနှင့်လုပ်ငန်းတွေရဲ့ လိပ်စာနှင့်
ဖုန်းနံပါတ်တွေ၊ လုပ်ငန်းရဲ့အကြောင်းအရာတွေ စတာတွေကိုမှတ်သားပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ဟာလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်တာမှန်သမျှ ရေးမှတ်ထားတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက် အထက်လူကြီးခေါ်ရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ အစည်အဝေးတက်ရင်ဖြစ်ဖြစ် ယူဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်။ သတိပြုရမှာက လုပ်ငန်းမှတ်စုကို မပျောက်အောင်နှင့် သူတပါး မကြည့်အောင်ထိန်းသိမ်းဖို့လိုပါတယ်။
နေ့စဉ်ကြည့်နေကြ ရိုးရိုးပြက္ခဒိန်ပေါ်မှာမှာဘဲရေးမှတ်နိုင်ပါတယ်။ ချိန်းဆိုထားတာတွေ၊ လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေ စတာတွေကို နေ့တွေအပေါ်မှာရေးမှတ်ထားခြင်းအားဖြင့် ရက်ချိန်းထပ်တာတွေ၊အချိန်မှီ ပြီးအောင်လုပ်ရမယ့် ကိစ္စတွေမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
ဒိုင်ယာရီလို့ဆိုတဲ့ အတွက် မှတ်တမ်းတခုပါ။ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာမှာ နေ့စဉ်ရုံးဆင်းခါနီး၊ အလုပ်/ဆိုင်သိမ်းခါနီးတိုင်းရေး သင့်ပါတယ်။ ပါသင့်တဲ့အချက်အလက်တွေကတော့ ငွေပေး/လက်ခံရရှိမှုများ ကိုအမည်နှင့် တကွ၊ တွေ့ဆုံခဲ့သူများ အချိန်၊ အကြောင်းအရာနှင့်တကွ၊ လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုနှင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်များ စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ ငွေလျှော်ရမယ့် ကိစ္စတွေ၊ အရေးယူခံရမယ့် ကိစ္စတွေက လုပ်ငန်းဒိုင်ယာရီကြောင့် မကြာခဏ လွတ်မြောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
အခုဖေါ်ပြပေးခဲ့တဲ့ မှတ်စုစာအုပ်လေးတွေက လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၀)နှစ်က ဆရာတယောက်ပြောပြလို့ ကျွန်တော်ပြုလုပ်သုံးစွဲခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းမှာ အခုချိန်ထိ အသုံးဝင်နေတဲ့ စနစ်ပါ။ ကျွန်တော့်ထက်ကောင်းတဲ့ စနစ်တွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေလုပ်ငန်းများကိုစနစ်တကျ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Mr Sky
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 8/31/2012 07:19:00 AM No comments:
Posted by nyinyi on သြဂုတ် 31, 2012 at 6:29am
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 8/31/2012 07:14:00 AM No comments:
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် လူသေပြုစုပွဲ (Ma' Nene festival) (သေချာစဉ်းစားပီးမှ ကြည့်ပါခင်ဗျာ)
Posted by နက္ခတ် on သြဂုတ် 30, 2012 at 10:38pm
ယင်းပွဲသည် သေဆုံးသွားပြီဖြစ်သော မိမိဆွေးမျိုးသားချင်း များကို ပြန်လည်တူးဖော်ပြီး အဝတ်အစား သစ်များ ဝတ်ပေးခြင်း၊ အစားအသောက်များ ပူဇော်ပသပေးခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်သောပွဲဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့ ပွဲကို သုံးနှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပပြီး အလောင်းပြန် တူးဖော်ခွင့်ရရှိကြသည်။ အလောင်းပြန်တူးဖော်ခွင့် ရသော မိသားစုများမှ ၎င်းတုိ့ မိဘ၊ ဘိုးဘွား၊ သားသမီး၊ ဇနီးခင်ပွန်း အစရှိသဖြင့် ဆွေမျိုးရင်းချာတို့ အလောင်း ကို သန့်စင်ပေးပြီး အဝတ်အစားသစ်များဝတ်ပေးသည်။ အစားအသောက်များ ပူဇော်ပေးပြီး မြေနေရာ သို့ ပြန် လည် မြှုပ်နှံပေးသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ပွဲတော် Ma' Nene festival သည် အင်ဒိုနီးရှား တို့၏ ကမ္ဘာကျော် ရိုးရာပွဲ တစ်ခုအဖြစ် တည်ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 8/31/2012 07:11:00 AM No comments:
သင့်ရဲ့ Laptop ဟာ ၀ယ်ခါစတုန်းကထက်စာရင် အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ ပိုပြီးနှေးကွေးသွားပြီဆိုတာ သင်သတိပြုမိတယ်ဆိုပါစို့။ သင်ဘာလုပ်မလဲ။ အလုပ်လုပ်တာ ပိုမြန်မယ့် နောက်အသစ်တလုံး ထပ်ဝယ်ဖို့ကလည်း သင့်အတွက် ခက်ခဲကောင်း ခက်ခဲ နေပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအတွက် အကုန်အကျသက်သာမယ့် ပြုပြင်မွမ်းမံမှုတွေကို သင်ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်ရ တော့မှာပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ အောက်မှ
ာ ရေးသားထားတဲ့ အချက် ၇ ချက်ကို စမ်းသပ်လုပ်ကိုင်ကြည့်ပါ။ သင့် Laptop ပိုမိုမြန်ဆန်လာတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 8/31/2012 07:08:00 AM No comments:
၁.၉ ၂၀၁၂ ၀ါခေါင်လပြည့်နေ့ (သို့) မေတ္တာအခါတော်နေ့… (နိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော်ကာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်)
Posted by + မေတ္တာရှင်မလေးရှင်းသန့်မေ on သြဂုတ် 31, 2012 at 4:20pm
မနက်ဖြန်က ၀ါခေါင်လပြည့်နေ့ (သို့) မေတ္တာအခါတော်နေ့…ဖြစ်ပါတယ်။
လအသီးသီးမှာလည်း ဘာသာတရားကို အခြေခံထားတဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ်များ ရှိနေပါတယ်။
ကဆုန်လပြည့်နေ့ကို ဗုဒ္ဓနေ့၊ ၀ါဆိုလပြည့်နေ့ကို ဓမ္မစကြာ အခါတော်နေ့စသဖြင့်
၀ါခေါင်လပြည့်နေ့ (သို့) မေတ္တာအခါတော်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
၀ါခေါင်လပြည့်နေ့ (သို့) မေတ္တာအခါတော်နေ့သတ်မှတ်ခဲ့တာကတော့
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ဟောတော်မူတဲ့ မေတ္တာသုတ်ကို အကြောင်းပြုပြီး သတ်မှတ်ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မြတ်ဗုဒ္ဓဟာ ဒီမေတ္တာသုတ်ကို ၀ါခေါင်လပြည့်နေ့မှာ ဟောတော်မူခဲ့တာ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ
၀ါခေါင်လပြည့်နေ့ကို မေတ္တာအခါတော်နေ့လို သတ်မှတ်ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မေတ္တာအခါတော်နေ့မှာ အားလုံးရဲ့ သန္တာန်မှာ မေတ္တာစိတ်လေးတွေ ကိန်ပြီး ဒေါသလေးတွေ ငြိမ်းကြစေဖို့၊
တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး မေတ္တာလေးတွေ ထားကြည့်ကြဖို့၊ တစ်ဦးချင်းရဲ့ စိတ်မှာ ဘယ်သူ့ဘယ်သူ အပေါ်မှ လှည့်ပတ်ခြင်း၊ ညှင်းစဲခြင်း၊
ဒုက္ခပေးခြင်း စတဲ့ မကောင်းတာတွေ မကိန်းရအောင် ကောင်းတဲ့စိတ်ထားလေးတွေ ထားနိုင်ကြဖို့
အားလုံး တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး မေတ္တာစိတ်နဲ့ ဆက်ဆံပေါင်းသင်းနိုင်ကြပါစေ…။
၉။ လူအချင်းချင်း၊ လှည့်ပတ်ခြင်း၊ ကင်းရှင်းကြပါစေ။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 8/31/2012 06:58:00 AM No comments:
အနှီးဘာသာသည် ပုဂ္ဂလအဓိဌာန်အယူအဆဖြင့် ဖန်တီးတီထွင်ထားသော
တစ်ယူသန်အစွဲအလမ်းများနှင့် ယင်တို့မှ ပေါက်ဖွားခဲ့သော
အကိူးအကြောင်းဆက်ပညာကိုလည်း ကျော်လွှားလွန်မြောက် ရလိမ့်မည်။
နာမ်တရာများကို လွှမ်းခြုံ၍ ဒိဌဓမ္မဖြင့် အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသော
ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ထိုအရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံသည်ကို တွေ့ရ၏။
မျက်မှောက်ခေတ် သိပ္ပံပညာ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်စွမ်သောဘာသာတရားတစ်ခုရှိသည်ဆိုပါလျင်
(ဘာသာပြန်ကို သာသနာ့အလင်းတန်းဂျာနယ်အတွဲ(၁) အမှတ်(၂)မှ ထုတ်ယူပါသည်။)
“ဗုဒ္ဓ ၏ အံ့သြဖွယ် မိန့်ခွန်းတော်”
“ဗုဒ္ဓ”သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မည်သည့်ဘာသာအယူဝါဒထူထောင်ဖွဲ့စည်းသူမျှ မပြုလုပ်ဝံ့၊
မပြုလုပ်နိုင်သော“ထူးခြားအံ့ဖွယ် ကမ္ဘာကျော်မိန့်ခွန်းတစ်ရပ်”ကို ရဲဝံ့ပြတ်သားစွာဟောကြားခဲ့
ဤ သုတ္တန်တရားတော် မှ ဗုဒ္ဓ၏မိန့်ခွန်းသံသည် အတွေးအမြင်မှုန်ဝါးနေသူကို အလင်း
တွေဝေငေးမောနေသူများကို သစ္စာတရားလမ်းမှန်ဆီသို့ တက်တက်ကြွကြွ လျှောက်လှမ်းနိုင်
အောင် လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်သော ကြည်လင်ချိုမြသည့်“ဓမ္မခေါင်းလောင်းသံ”လည်းဖြစ်ပေသည်။
သင်တို့သည် လက်ခံကျင့်သုံးအပ်သော အမှန်တရားဓမ္မတို့ကို ဤ အချက်(၁၀)ချက်
ဖြင့် ဆင်ခြင်စိစစ်၍ ဆုံးဖြတ်အားထုတ်ကြကုန်လော့…။
(၁) ဤတရားတော်သည် မိရိုးဖလာ ရှေးအစဉ်အဆက်က ပြောကြားသိမှတ်လာခဲ့တာပဲ
လို့“ရှေးစကား”ဖြစ်ရုံနဲ့လည်း အယူဝါဒတစ်ခုကို လက်မခံလိုက်ပါနဲ့ဦး။
(၂) ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် ကျင့်သုံးလာခဲ့တဲ့ “ဓလေ့ထုံးစံ”ဖြစ်ရုံနဲ့ပဲ အားလုံးကို အမှန်ဖြစ်
တယ် လို့ယူဆပြီး လက်မခံလိုက်ပါနဲ့ဦး။
(၃) လူအများကပြောနေကြတာပဲ ဆိုပြီးတော့ လူသိထင်ရှား“နာမည်ကျော်ကြားရုံ”နဲ့
မစုံစမ်းမဆင်ခြင်ဘဲ အဲဒီ အယူဝါဒကို လက်မခံလိုက်ပါနဲ့ဦး။
(၄) “ရှေးဟောင်းစာပေကျမ်းဂန်”တွေထဲမှာ ရေးထားတာပဲ ဆိုပြီးတော့လည်း အလွယ်
(၅) မိမိဥာဏ်ရှိသမျှ တွေးခေါ်ကြံဆထားတဲ့ “အယူအဆ”ကိုလည်းပဲ မှန်လှပြီ လို့မသတ်
(၆) အဲဒီတရားအယူအဆဟာဖြင့် ထောက်ပံ့အမှီပြုအပ်တဲ့ “နည်းနာနိဿယ”တွေ၊
အကြောင်းပြချက်တွေရှိနေတာဘဲ ဆိုပြီးတော့လည်း အလွယ်တကူ လက်မခံလိုက်
(၇) မိမိဘာသာ“တွေးခေါ်ကြံစည်ဆင်ခြင်ပြီး”။ဟုတ်လှပြီ လို့ သဘောကျနှစ်ခြိုက်ရုံနဲ့လဲ
မှန်လှပြီ လို့ မယူဆလိုက်ပါနဲ့ဦး။
(၈) ဒီတရားအယူအဆတွေဟာဖြင့် မိမိစဉ်းစားတွေးတောထားတာတွေနဲ့“တူညီတာပဲ”
ဟု ဆိုရုံမျှနဲ့ လည်း အမှန်တွေဘဲ လို့ လက်မခံလိုက်ပါနဲ့ဦး။
(၉) အများက“လေးစားရိုသေအပ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး”ရဲ့ ပြောတဲ့စကားပဲ ဆိုပြီးတော့လည်း
မဆင်မခြင် ပဲ မယုံကြည်လိုက်ပါနဲ့ဦး။
(၁၀) ငါတို့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ချစ်ခင်တဲ့“ငါတို့ဆရာသမား”ပြောကြားတဲ့စကားပဲ ဆိုပြီတော့
လည်း အပြီးသတ် လက်ခံ ယုံကြည်မှုကို မပြုလိုက်ပါနဲ့ဦး။
ပြုနိုင်သော တရားတို့ကိုသာ လက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးမှ ယုံကြည်လက်ခံကြပါ….ဟု
ငါ့ကိုမယုံကြည်လျှင် အပြစ်ရှိသည်။ငရဲ သို့ကျရောက်စေရမည်။”…ဟုခြိမ်းခြောက်ဟောပြော၍
ဆင်းရဲဒုက္ခငြိမ်းအေးပြီး ချမ်းသာသုခကိုဖြစ်စေတဲ့ ….
သစ္စာ(၄)ပါး၊မဂ္ဂင်(၈)ပါး..တရားဓမ္မကို ဦးစွာကျင့်သုံးပြီး ကိုယ်တိုင် ပစ္စုပ္ပန်မှာ လက်တွေ့
သဘာဝကျကျ အကျိုးခံစားရမှ ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လက်ခံကြပါ”…ဟု..
အတွက် “အံ့သြတုန်လှုပ်ဖွယ် မိန့်ခွန်းတော်တစ်ရပ် ” ပင်ဖြစ်ပေတော့သည်။
ကျမ်းကိုး- I.D.F မှထုတ်ဝေသည့်“-“ဓမ္မရသ စာစုများ”အမှတ်(၂)၊(စာ-၁၄)
ကျွန်တော်တို့ရဲ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟာ အတုမရှိသော ကောင်းမြတ်တဲ့အဆုံးအမတွေ
ပေးဝေကာ မြင့်မြတ်တဲ့ လမ်းပြသူပါ။
ဗုဒ္ဓ၏ တရားတော်များသည် ခြောက်ပါးသော ဂုဏ်တော်တိုနှင့် ပြည့်စုံပါသည်။
၁။ သွာက္ခာတော = တရားတော်၏ အစ၊ အလယ်၊ အဆုံးကောင်းသောဂုဏ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 8/31/2012 06:16:00 AM 1 comment:
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် လူသေပြုစုပွဲ (Ma' Nene fe...
၁.၉ ၂၀၁၂ ၀ါခေါင်လပြည့်နေ့ (သို့) မေတ္တာအခါတော်နေ့… ...
မိန်းမ တို၏ မာယာ ( ၄၀ )
Android OS သုံး Application, Themes, Games, Wallpa...
အသည်းရောဂါ အတွက် သခွတ်ပြုတ်ဆေးရည်
Android Phone အားလုံးအတွက် ကရင်ပြည်နယ် ကိုယ်စားပြု...
ဧတဒဂ် ဘွဲ့တံဆိပ်တော်ရ ရဟန်းမိန်းမ ၁၃-ပါး
ဧတဒဂ် ဘွဲ့တံဆိပ်တော်ရ ရဟန်းယောက်ျား ၄၁-ပါး
မြတ်စွာဘုရားရှင်အား အမြတ်ဆုံး ပူဇော်မှု
ဆင်းတုပြဿနာ (သို့မပာုတ်) ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဒဘာသာတို့၏ အကြီ...
ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ် ကမ္ဘာကျော် ပညာရှင်များ၏ အတွေးအမြင်များ...
ဝိပဿနာ အကျိုးကြီးမားပုံ …(ဝေလာမသုတ္တန်)
ကွန်ပျူတာက Hard Disk Drive ခွဲနည်း
ငါတို.ဘိုးဘေးတွေ ကျွန်ဖြစ်ခဲ့ရဘူးတယ် (သို့မဟုတ်)ေ...
စစ်တပ်ဟာ နိုင်ငံရဲ့ အစေခံဖြစ်ရမယ်။ နိုင်ငံဟာ စစ်တပ...
ခြင်ပိုကြိုက်တဲ့သွေးဆိုတာ တကယ်ပဲလား (ဆေးပညာ)
မြန်မာစာ ဆင်းရဲကြပုံများ ( မောင်သာနိုး )
Malware တွေကိုရှင်းလင်းပေးတဲ့ အကောင်းဆုံးsoftwareပ...
လေဒီဂါဂါ နှင့် သူမ၏ ဆန်းဆန်းပြားပြား ဖက်ရှင်များ
ရင်ကျပ်ပန်နာ ဖြစ်သူများ (((တိုင်းရင်ဆေးဆောင်ထား)))...
ဝမ်းဗိုက်ရောဂါအကြောင်း သိကောင်းစရာ လေ့လာပါ။
ထင်ပေါ်ကျော်ကြား ... ဘယ်လက်ပိုင်ရှင်များ
ကမ္ဘာ့အသက်ငယ်ဆုံး အသက် ၈နှစ်သား ကွန်ပျူတာ နည်းပညာရှ...
ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ် ကမ္ဘာကျော် ပညာရှင်များ၏ အတွေးအမြင်များ...
နေ့လယ်ခင်းတွင် တစ်ရေးအိပ်စက်ခြင်းဖြင့် အခက်အခဲများ...
ဗောက်ပျောက်ဆေး .( ဗောက်ထနေသော ညီအကို မောင်နှမများ...
အံ့ ဖွယ်ရှောက်ရွက် အစွမ်းထက်
ရှုမငြီးစရာ အပြင်အဆင် များဖြင့် ကနေဒါမှ ဈေးအကြီးဆံ...
လကမ္ဘာပေါ် ပထမဆုံး ခြေချခဲ့သူ ကွယ်လွန်
ဆီး (ဇီး) သီး၏ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ
အဆင့်မြင့်လူသား စာရင်းဝင်သည့် လူယဉ်ကျေး
ကွန်ပျုတာမှာ မြန်မာစာထည့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီဟာလေး...
ဆေးလ်ိပ်ကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်တတ်သော ကြောက်စရာရေ...
ဒီဇိုင်းဝါသနာပါသူများအတွက် second production - မြန...
Photoshine Software ... ဓါတ်ပုံတွေကို ဘက်ဂရောင်း လ...
ဥာဏ် ၈ မျိုးအကြောင်း...
ကိုရီးယားတွေ ခွေးသားဟင်း စားကြပုံများ
မယုံနိုင်လောက်စရာ သေတွင်းကလွတ်ခဲ့ တာ...
အရေပြားပေါ်က ညှင်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ
လက်သည်း ခြေသည်း အက်ကွဲခြင်း
အရှင်ဆန္ဒာဓိက (ရွှေပါမီတောရ) ၏ VCD တရားတော်များဒေါင်...
တိုင်းပြည်ချက်ချင်း ဦးမော့လာအောင် လုပ်ချင်လျှင်.
ယူကရိန်းနိုင်ငံမှ ကမ္ဘာ့အလေးဆုံး ဧရာမ လေယာဉ်ပျံ
အင်္ဂါလေးပါးပြည့်စုံလျှင် ဒုတိယဘ၀မှာ ကိစ္စပြီးပုံတရား...
စိတ် ထား လေး စား စ ရာ .. နှ လုံး လှ လွန်း တဲ့ သူပါ...
လေစွမ်းအားဖြင့် မောင်းနှင်နိုင်မည့် ကား...
အရွယ်ရှိခိုက် လုံ့လ စိုက်ပါလေ
(၃၁)ဘုံ ရှိ၊ မရှိ အမေးပုစ္ဆာ
မနက်အိပ်ယာထချိန် နွားနို့မသောက်သင့် (ဝမ်းထဲအစာမရှိ...
ရုရှားနိုင်ငံက ရေခဲနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ အနုပညာလက်ရာ...
အီရတ်အာဏာရှင်ဟောင်း ဆဒမ်ဟူစိန်ရဲ့ ရွှေသေနတ်များ...
Online မှာအကောင်းဆုံး ပုံပြင်တဲ့ Website လေးဆယ် ။
" သွား " များ ဖြူဝင်းစေရန် နည်းလမ်းကောင်း ( ၁)
ဥရောပမှာ စာမသင်ပါ (ကောင်းဆက်နိုင်-အံ့သြလွန်းလို့ေ...
ဆီး မထိန်းနိုင်သည့် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန်
၁၂ ရာသီဖွားတွေအကြောင်းရယ်စရာပုံလေးတွေ တဲ.... ဟိဟိ